Fomba fiasa 5 tena ilaina tadiavina amin'ny sehatra fananganana endrika an-tserasera | Martech Zone
Raha mitady fomba mora sy mahomby ary azo antoka ianao hanangonana ireo fampahalalana ilainao amin'ny mpanjifanao, ny mpilatsaka an-tsitrapo anao na ny vinavinanao, ny vintana dia mety hampitombo ny vokatrao amin'ny laoniny ny mpamorona endrika an-tserasera. Amin'ny fampiharana mpiorina endrika an-tserasera amin'ny orinasanao dia hahafahanao miala amin'ny fizotran'ny boky maharitra mandany fotoana ary hitahiry fotoana, vola ary loharano ampy.
Na izany aza, misy fitaovana maromaro any mba hisafidianana, fa tsy ny rehetra mpanangana endrika an-tserasera noforonina mitovy. Amin'ity lahatsoratra bilaogy ity dia hianaranao ireo fiasa dimy tokony hananana tokony hifantohanao rehefa misafidy mpamorona endrika an-tserasera ho an'ny orinasanao manokana ianao.
Endri-javatra 1: endrika sy valiny tsy voafetra
Na miasa amin'ny orinasa kely ianao na orinasa lehibe iray dia maniry ny hisafidy mpamorona endrika an-tserasera sy sehatra fanangonana angon-drakitra ahafahanao manangana endrika maro sy manangona valiny maro araka izay ilainao. Fitaovana maro any no mametraka satroka amin'ny isan'ny endrika azonao apetraka na amin'ny isan'ireo valiny azonao angonina, izay mety hiteraka tsy fahampiana firy noho ny famahana azy.
Rehefa manomboka mampiasa mailaka an-tserasera ianao amin'ny tranga fampiasanao azy tany am-boalohany, dia mety hahita fomba manampy bebe kokoa hampiasana azy ireo izay tsy noeritreretinao taloha akory. Noho izany antony izany dia tsara ny miantoka mialoha ny fotoana hahafahan'ny mpanao mpanao endrika mandray ireo zavatra ilainao amin'ny ho avy. Mandritra ny fotoana maharitra, ny mpanao endrika tsy manam-petra no safidy azo refesina kokoa, azo itokisana kokoa ary lafo kokoa.
Endri-javatra 2: Ny fahaiza-manao fampifangaroana marobe
Tanjona lehibe amin'ny fananganana endrika sy fanangonana valiny an-tserasera ny fanamorana ny fizotry ny asa. Mba hanaovana izany dingana iray lavitra izany dia zava-dehibe ny fisafidianana mpanorina endrika an-tserasera izay mifanaraka amin'ireo fitaovana sy haitao efa ampiasainao. Ny endrika tranonkala mitambatra dia afaka mifandray amin'ny rafitra hafa, mandeha ho azy, mamonjy fotoana sy ezaka bebe kokoa.
Raha mampiasa CRM toa ny Salesforce ianao dia tadiavo ny tranokala endrika web manana fampidirana Salesforce matanjaka sy matanjaka. Ny endrika an-tserasera izay mifandraika amin'ny Salesforce dia azo alamina mba hampitomboana ny fahalalan'ny mpampiasa, ary koa afaka manavao, mijery ary mamorona zavatra mahazatra sy mahazatra ao amin'ny Salesforce. Ireo fahaiza-manao ireo dia afaka mampitombo ny famokarana sy manova ny fizotran'ny fandaminana.
Ohatra, rehefa ny Fikambanan'ny tanora YMCA Kentucky Salesforce natsangana, ny mpikambana dia naka FormAss Assembly tamin'ny tetezamita haingana. Ny fanaovana izany dia namela ny fikambanana hahatratra mpianatra mihoatra ny 10,000 isan-taona amin'ny alàlan'ny fampidirana Salesforce. Ny fahaizana manangona sy mampiasa angona madio sy voarindra ao amin'ny Salesforce dia ahafahan'ny ekipa manohana tsara kokoa ny vondrom-piarahamonin'izy ireo.
Toy izany koa, ny fampidirana amin'ny Google, Mailchimp, PayPal, ary ireo fitaovana hafa dia hahatonga ny fanangonana angon-drakitra tsy misy tohiny ho an'ny mpiasao sy ny mpanjifanao.
Endri-javatra 3: filaminana sy fanarahan-dalàna
Na manangona angona avy amin'ny mpanjifa ianao, ny mpiasa, ny marary, ny mpilatsaka an-tsitrapo na ny fanantenana, filaminana sy fanarahan-dalàna tsy azo ifampiraharahana. Misafidiana mpanorina endrika sy sehatra fanangonana data izay mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fiainana manokana momba ny data izay mihatra aminao sy ny mpanjifanao, toa ny HIPAA, GDPR, GLBA, CCPA, PCI DSS Haavo 1, sy ny hafa. Rehefa misafidy sehatra mifanaraka ianao, dia tsy hiaro ny angon-drakitra angoninao fotsiny, fa manangana fahatokisana sy fahatokisana miaraka amin'ireo mpanjifanao ihany koa.
Mba hitazomana ny endrikao sy ny valiny azo antoka, tadiavo ny encryption amin'ny fitsaharana sy amin'ny fitaterana. Ataovy azo antoka koa fa manana ny safidinao ny sehatra misy anao mba hiarovana ireo angona tena saro-pady raha ilaina izany. Amin'ny alàlan'ireto fepetra fiarovana ireto dia afaka matoky ianao fa ny data rehetra angoninao dia mijanona eo amin'ny tanana ankavanana.
Endri-javatra 4: Fifanentanana sy fanamboarana
Rehefa misafidy mpamorona endrika ianao dia te ho azonao antoka fa afaka manamboatra endrika hamenoana izay ilainao manokana ianao. Raha tokony hipetraka amin'ireo endrika sarotra apetraka ianao dia safidio ny sehatra iray izay manome modely azo ovaina isan-karazany mba hanampiana anao hanomboka amin'ny tongotra ankavanana.
Mpamorona endrika tsara sy sehatra fanangonana angona dia ho mora ampiasaina na inona na inona fahaizanao ara-teknika. Mba hahazoana antoka fa afaka mamorona endrika sy mihazakazaka haingana ireo mpiara-miasa aminao nefa tsy mila miantehitra amin'ny ekipanao IT dia misafidiana iray izay manome fampiasa tsy misy kaody sy interface ho an'ny mpampiasa. Zava-dehibe ihany koa ny manamarina raha te hahafantatra tsara ny endrik'ireo endrikao sy ny endriny hifanaraka amin'ny marikao amin'ny orinasanao ho an'ny traikefa mpampiasa tsy milamina ianao.
Endri-javatra 5: Fanohanana ho an'ny mpanjifa azo antoka
Farany nefa azo antoka fa tsy farany, alao antoka fa misafidy sehatra endrika tranonkala azo antoka ianao mpanjifa fanohanana ekipa raha sendra manana fanontaniana, ahiahy na fitazomana ianao. Miankina amin'ny karazana data angoninao, azonao atao ny mieritreritra ny hisafidy safidy iray izay manome fanohanana laharam-pahamehana raha sendra misy tranga maika. Mba ahazoan'ny fikambanananao tombony betsaka indrindra dia azonao antoka fa vonona ny hanampy anao amin'ny alàlan'ny fanamby rehetra ny ekipa mpanohana ny mpanjifany.
Ny sehatra sasany dia manolotra fanampiana sy fampiofanana fampiharana mba hanampiana ny mpanjifa hanomboka tetikasa lehibe, izay mety hahasoa tokoa amin'ny farany. Raha manana tranga fampiasana sarotra kokoa ianao ary mila fanampiana rehefa miarina sy mihazakazaka, ny fanohanan'ny fampiharana dia fanolorana lehibe tokony hotadiavina.
Rehefa any ianao no mitady mpanamboatra endrika an-tserasera tonga lafatra sy sehatra fanangonana angon-drakitra handaminana ny fizotran'asa ao amin'ny fikambanananao, dia alao antoka fa hadino ao an-tsaina ireo lafin-javatra ilaina dimy ireo.
FormAss Assembly dia mpanorina endrika iray sy iray amin'ny sehatra iray izay manolotra ireo fiasa rehetra ireo sy ny maro hafa. Fikambanana an'arivony amin'ny indostria rehetra no mampiasa fampidirana henjana an'ny FormAss Assembly, fenitra avo lenta amin'ny filaminana sy fanarahan-dalàna, ary mpanamboatra endrika mora ampiasaina hamahana ireo olan'ny fanangonana angona sy hanatsorana ireo dingana sarotra.
Jereo ny FormAss Assembly mivantana amin'ny fitsapana maimaimpoana, tsy mila carte de crédit. Ampiasao Martech Zonefihenam-bidy an'ny mpiara-miasa miaraka amina kaody DKNEWMEDFA20.
Fitsapana maimaimpoana amin'ny FormAss Assembly
Tags: ccpafanarahan-dalànadata collectionmpanamboatra endrikaendrika fananganana endrikafamolavolanagdprGLBAGoogleHIPAAmpanamboatra endrika an-tserasera